သတင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များ Archives – Seadstem – Southeast Asian Digital
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ SEADSTEM အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို SEADSTEM မိတ်ဖက် Brainworks International School နှင့်ပူးပေါင်း၍ 2020 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 8-9 ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်မှ ဆရာပေါင်း 30 ကျော် ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ SEADSTEM …
ဒီဇင်ဘာလ 2019 မှအောက်တိုဘာလ
အဆိုပါသိပ္ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်အောက်တိုဘာလကနေဒီဇင်ဘာလမှအင်ဒိုနီးရှား, မလေးရှား, မြန်မာ, ဖိလစ်ပိုင်, ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်နေရာကြာပါသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတိအကျရက်စွဲများများအတွက် မှာ website ကိုစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါပွဲတော်အရှေ့တောင်အာရှ, တောင်အာရှ, အာဖရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်လက်တင်အမေရိကရှိသိပ္ပံဆက်သွယ်ရေး၏အခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်: ဒေသခံမိတ်ဖက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင်ကသိပ္ပံစာတတ်မြောက်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်နှင့်ပညာရေးပူးတွဲအတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်မှတဆင့်ခေတ်ပြိုင်သိပ္ပံနည်းကျ, နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏အသိအမြင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် လှုပ်ရှားမှုများ။ အဆိုပါသိပ္ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုမှ accessibly နှင့် entertainingly သိပ္ပံနည်းကျကိစ္စများတင်ဆက်နှင့်သိပ္ပံပျော်စရာဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက၎င်း၏မျိုး၏အကြီးဆုံးပွဲဖြစ်လာခြင်း, 2005 …
GovInsider Live သည် ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား အာရှရှိ ပြည်သူဝန်ထမ်းများအား တင်ပြပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် SEADSTEM နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ ပညာရေးကို STEM နယ်ပယ်နှင့် ၂၁ ရာစု စွမ်းရည် ချဉ်းကပ်မှုအတွင်း မည်သို့ ပေါင်းစပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ညီလာခံတွင် ပညာရပ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့များအား မိနစ် ၉၀ …
Photo: © iStock-1214087281_ake1150sb
SEADSTEM အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 2021 – လျှောက်လွှာများအတွက်ခေါ်ဆိုပါ
Goethe-Institut ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိသြစတြေးလျသံရုံးနှင့် SEAMEO (အရှေ့တောင်အာရှပညာရေးဝန်ကြီးများအဖွဲ့)သည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ STEM အတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးပလက်ဖောင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုရန် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ SEADSTEM – အရှေ့တောင်အာရှဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်း (www.seadstem.org) သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော …
Photo: © Oliver Hans Wolf Goethe-Institut Myanmar
Goethe-Institut နှင့် GIZ တို့သည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရေးရုပ်သံလိုင်းတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ အသစ်တည်ထောင်ထားသော ရုပ်သံလိုင်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ရုပ်သံလိုင်းအတွက် Deutsche Welle မှ …
Photo: © iStock-1030837814_airdone
Covid-19 ကမာ္ဘ့ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးထားပြီး လူအချင်းချင်း ခပ်ခွာခွာနေရမည့် အစီအမံများကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်ရှိ ကျောင်းများ ယာယီပိတ်ထားကြရသည့်အတွက် ဆရာများနှင့်မိဘများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းသင်ကြားရေးနှင့် အွန်လိုင်းကျောင်းများ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ အွန်လိုင်းရင်းမြစ် ဝယ်လိုအားသည် လွန်ခဲ့သောလများအတွင်း သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး SEADSTEMအနေဖြင့် …
Photo: © iStock-1008096736_PATCHARIN-SAENLAKON
မကြာမီ – အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရှိ SEADSTEM ဦးဆောင်ဆရာများကို ခေါ်ဆိုပါမည်
ဘန်ကောက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံမှ တက်ရောက်သူများပါဝင်သည့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို Covid-19 ရောဂါအခြေအနေအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင် အွန်လိုင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပုံစံဖြင့် ယခုနှစ်မှပင် …
STEM Student Experiments Win Flight Opportunity in NASA Tech Contest - SpaceRef
"At NASA, we educate and inspire the next generation of scientists, engineers, and explorers," said NASA Administrator Bill Nelson.
Santa Ana nonprofit gets $100000 from Boeing to fund STEM programs in Southeast LA
An educational nonprofit for after-school learning programs recently nabbed $100,000 from the Boeing Company to fund STEM learning in Bellflower, ...
Cal State Dominguez Hills students build 3D replica cars of childrens' dreams - Daily Breeze
Students at the university's Center for Innovation in STEM Education ... the students were provided with hands-on learning to further develop ...
STEM Action Center Agenda 2022-2025 | News | idahocountyfreepress.com
The Idaho STEM Action Center presented their agenda for the fiscal years 2022-2025 to the House Education Committee by advancing innovative ...
College Advisor - Grant Funded (DOD-STEM) job with City Colleges of Chicago | 435587
Malcolm X College (MXC) was awardedathree-year grant from the Department of Defense through its National Defense Education Program. MXC's initiative ...
TechPoint Foundation talks about the importance of STEM education - YouTube
INDIANAPOLIS - TechPoint Foundation for Youth talks about the importance of STEM education. For more fun on the show: https://fox59.com/indy-now/
TechPoint Foundation talks about the importance of STEM education - Fox 59
TechPoint Foundation talks about the importance of STEM education. Indy Now. by: Beth Finello. Posted: Jan 21, 2022 / 02:12 PM EST / Updated ...
Biden Administration Wants to Attract International STEM Students - MeriTalk
Under this new policy, the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) will establish the “Early Career STEM ...
DHS Adding 22 New STEM Fields of Study to OPT Program - MeriTalk
The program allows F-1 visa students earning bachelor's, master's, or doctoral degrees in certain STEM fields to remain in the U.S. for up to 36 ...
Students at Frisco Elementary School participate in the Ute STEM educational program, which the History Colorado Center trained the Summit ...
Biden administration announces policy changes to attract international STEM students | TheHill
... technology, engineering and math (STEM) students and researchers to ... 22 new fields of study in the STEM Optional Practical Training program ...
stem: US adds 22 new fields of study for international students' programme - Times of India
“Through STEM education and training opportunities, DHS is expanding the number and diversity of students who excel in STEM education and ...